समग्रमा रुपन्देहीको शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ : प्रवीण पोखरेल प्रमुख ( प्रहरी उपरीक्षक ) जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देही - Ujyaalo Sandesh Online
समग्रमा रुपन्देहीको शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ : प्रवीण पोखरेल प्रमुख ( प्रहरी उपरीक्षक ) जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देही
–हामीलाई कारवाही गर्ने बाध्य अवस्था नबनाइदिनुस् !
रुपन्देहीलाई मुलुककै धेरै आर्थिक गतिविधि हुने जिल्ला हो । दोस्रो ठुलो नाका, निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लगायतले पनि रुपन्देहीको विकास दिनप्रतिप्रति बढ्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर पछिल्लो समय रुपन्देहीको शान्ति अवस्थाबारे उज्यालो सन्देश अनलाइन डटकमका कार्यकारी सम्पादक विवेक विश्वकर्माले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रवीण पोखरेलसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं :
१. रुपन्देहीमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
मैले भन्नुपर्दा अहिलेसम्म अन्डरकन्ट्रोल नै छ । केही छिटपुट घटना गएको हप्ता भएको थियो । ती घटनाहरुको अनुसन्धान गरेर टुंगो लगाएका छौं । केही घटनाको अनुसन्धानमा हामी लागि रेका छौ । समग्रमा रुपन्देहीको शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ ।
२.यहाँ रुपन्देहीमा आइसकेपछि जिल्लामा के कस्ता समस्या देख्नुभयो ?
यहाँ सबैभन्दा धेरै हुने घटना सड्क दुर्घटना हो अब हाइबे पनि धेरै छ । बाटोघाटो पनि धेरै भित्री संजालहरु पनि छ । यहाँ सवारी दुर्घटनाको संख्या चाही छ । त्यसपछि जस्तै झुण्डिएर, विष सेवन् गरेर आत्महत्या गर्ने पनि देखिइएको छ । त्यसपछि महिला हिंसा, महिलाविरुद्ध हुने अपराधहरु पनि देखिएको छ । अन्य अपराधहरु त्यति धेरै छैन् ।
३. खुल्ला सीमाका कारण चोरी तस्करी पनि उत्तिकै हुने गरेको छ ? यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी कार्यालयबाट के कस्ता कदम चालिएको छ ?
तस्करी नियन्त्रण गर्नको लागि केही डेडीकेटेड टिम राखेका छौ । हुन त ६० किलोमिटर लामो बोर्डर छ । ठेक्कै बोर्डरमा सशस्त्र प्रहरीको संख्या पनि छ । वहाँहरुले पनि कार्यसम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ । हामीले पनि चोरी तस्करीका सामान बरामद गरी कारवाही गरिरहेका छौ । त्यसको लागि पनि एउटा डेडिकेटेड टिम छ । बेलुका त्यो टिम र उ कतै नदेखेको वा अन्य कुरा भइरहेको छ त्यसको लागि प्रहरी निरीक्षकको टोली पनि बेलुका खट्छ ।
अहिले तपाईले भन्दै गर्दा खेरी गएको वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जति मात्रमा तस्करीका सामानहरु बरामद गरेको थियो त्यो चाहीं यो आर्थिक वर्षमा सुरुकै तीन महिना मा हामी बरामद गरिसकेका छौं । अहिले भनौ न ४ करोड ७७ लाखको सामानहरु बरामद गरेर अहिले करिबकरिब ७ करोडका हाराहरीमा आइसकेका छौ । हाम्रो टोली लागि रहेको छ । यो भन्ने कुरा चाहिं प्रहरीको मात्रै भन्दा पनि सबैको सहयोग अत्यन्तै सहयोग देख्छु ।
सुचना पनि अइरहेको छ । अहिले अलि कताकता कमी भएको पनि महसुस भएको लाग्छ । कतै प्रहरीको मिलोमतो कुरा आएको खण्डमा एकचरण भेरीफाइ गरी कतै मिलोमतो हुने संकेत मात्रै पाए चेन्ज पनि गरेको छु । लगभग रुपन्देहीमा प्रहरी जवानदेखि जुनियर अफिसर सबै ठाउँको कार्यक्षेत्र चेन्ज गरिसकेको छु ।
४. पछिल्लो समय जिल्लामा हत्या, बलात्कारका घटना पनि बढेका छ्न । जिल्लामा सुरक्षा चुनौती बढ्कै हो ?
पहिला नै म भने महिलाविरुद्ध हुने हिंसा निकै नै छ । अब यसमा बलात्कारको घटना तीनचार वटा अलि हाइलाइट छ । एउटा कम उमेरको महिलामाथि, एउटा आफ्नै बुवाले छोरी माथि यस्तैयस्तै घटनाहरु आइरहेका छन । अब यो घटनाक्रमलाई मैले यसो हेर्दा खेरी कारण भने पाँच ५ वर्ष बच्चालाई बलात्कर नर्मल (सामान्य) मान्छेले गदैन् । ७० वर्षको वृद्धालाई नर्मल मान्छेले बलात्कार गर्छ भने मलाई लाग्दैन । तिनीहरुको व्याकहिष्ट्री पनि हेरिहरेको छु मैले, दुईटै सम्बन्धविच्छेद भएका व्यक्तिहरु छन् । त्यो इच्छा चाहनाको लागि नै हो भन्ने कुरा गरेका छन् । भलै एकजनाले बयानको क्रममा स्वीकार गर्नुभएको छैन् । त्यो भएको हिसाबले त्यो तीनवाटै घटनालाई फरकफरक कोणबाट हेरेको छु । अब यो चाहीं कस्तो हो भने खुल्ला ठाउँ भन्दा पनि एकान्त ठाउँमा र यसपछि विशेषगरि घरपरिवारको नजिकैबाट, छिमेकीहरुबाट त्यो मौका छोपेर गर्ने हुनले हामी सचेत हुन जरुरी छ । यसमा प्रहरी त हुनु परिहल्यो, यसबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु चलाउने, विभिन्न सामाजिक संघ–सस्थाहरु पनि लाग्नुपर्ने भयो, जस्तै चिल्हियाको घटनामा पनि हामी दुईदुई पटक गयौ विभिन्न संघ–सस्थाहरु पनि पुग्नु भएको छ । त्यहाँका जनताहरुलाई एसोर गर्ने काम हामी गरिरहेका छौ । अन्य ठाउँमा पनि कार्यक्रम गर्नुपर्ने देख्छु म ।
५.दक्षिण एसियामा सुरक्षाको दृष्टिकोणदेखि अरु सबै दृष्टिकोणले उत्कृष्ट भनिएको नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानमा निकै समय खर्चिन्छ भनिन्छ ?
अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने साधनस्रोत विश्वका ठुल्ठुला राज्यले प्रयोग गर्ने एउटै हो । वहाँहरुको अलि धेरै संख्यामा होला अलि कति लेटेस्ट भर्जन तत्काल आउँछ होला । हामीले नै गर्ने त्यही नै हो त्यो भएको कारण ले गर्दा अब हामी पनि असक्षम छैनौ, हामी पनि गर्न सक्छौ गरिरहेका छौ । अब यसमा कस्तो हुन्छ भने कुनै कुरा अनुसन्धानमा लेट आउनुपर्छ, यो यस्तो हुन सक्छ, यो यस्तो हुन सक्छ, त्यसलाई भेरिफाई गर्दैगर्दै जे हो त्यसमा गएर हिट गर्ने हो । त्यो लेट अयो भने तत्काल हुन्छ । त्यो लेट आउन कति समय लाग्छ । कसैले सूचना दिन पर्यो, कसैले केही भन्न पर्याे । त्यस्तो किसिमकोव्यवहार समाजमा देख्न पर्यो । त्यस्तो खालको आयो भने ढिलो अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउने नेपाल प्रहरी सक्षम छ र विश्वको हरएक देशका प्रहरीले प्रयोग गर्ने साधनस्रोत हामी कहाँ छ ।
६. अन्तिममा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
अहिले कुहिरो हुस्सुले गर्दा पाँच मिटर दश मिटर पनि देखिदैन, जाडो पनि छ त्यस्तो बेलामा सकभर आवश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कौं । निस्कनै परे न्यानो लुगा लगाएर निस्कौ , चिसो नहुने कुरा खाउँ, न्यानो भएर बसौ भन्न चाहन्छु । त्यसपछि कानून उल्लंघन गर्ने काम नगरौ । हामीलाई कारवाही गर्ने बाध्य अवस्था नबनाइदिनुस् भन्न चाहन्छु । अन्त्यमा भन्नु पर्दा दिदीबहिनी , महिलाहरु माथि अपराध पनि बढेको हुनले वहाँहरुलाई पनि आदरसम्मान गर्न सिकौं जसरी आफ्नो दिदीबहिनीहरुलाई आदर सम्मान गर्छौ । त्यसै गरी अरु दिदी बहिनीहरुलाई पनि सम्मान गरौ ।
छिपागढका विद्यार्थीलाई पोसाक वितरण